Ramos Oo United Ku Wajahan, Mustafi >Barcelona, Dembele!!…. & wararkii ugu dambeeyay suuqa. – Garsoore Sports
Ramos Oo United…
Suuqa kala-iibsiga cayaartooyda ee bishan Janaayo ayaa maraya maalmihii ugu dambeeyay, maalinta isniinta ee berrito ah ayaa lagu wadaa inuu si rasmi ah suuqa u xirmo, kooxuna waxay ka gaarsiinayaan xiritaanka suuqa kahor inay saxiixyadooda dhammeystiraan.
Daafaca reer Spain ee Sergio Ramos ayaa diyaar u ah inuu ka tago Real Madrid, waxaana uu xiiseynayaa u dhaqaaqista kooxda Manchester United. (Mirror)
Sidoo kale Manchester United ayaa isha ku heysa daafaca dhexe ee kooxda Sevilla Jules Kounde, oo 22 jir ah kaasoo ay dooneyso inay lasoo saxiixato suuqa kala iibsiga xagaaga. (Mirror)
Kooxda West Bromwich Albion ayaa dooneysa 30 jirka weerarka uga cayaara kooxda Crystal Palace ee Christian Benkeke. (The sun)
23 jirka garabka uga cayaara kooxda Barcelona Ousmane Dembele oo lala xiriirinayo kooxaha Man United, Chelsea iyo Juventus ayaa doonaya in uu sii joogo garoonka Camp Nou ee kooxda reer Spain. (Sport – Isbaanish)
Daafaca midig ee reer Ivory Coast Serge Aurier, oo 28 jir ah, ayaa u dagaalamaya mustaqbalkiisa kooxda Tottenham kaddib markii uu dagaal ka dhex aloosay qolka qolka lebiska kooxda Spurs qeybtii hore ee kulankii ay guuldarrada kasoo gaartay Liverpool isagoo laga saaray cayaarta qeybta dambe (Mail)
AC Milan ayaa dooneysa inay 15 milyan oo ginni kula soo saxiixato daafaca midig ee kooxda Manchester United Diogo Dalot.
Arsenal ayaa qorsheyneysa inay u dhaqaaqdo daafaca garabka midig ee kooxda Crystal Palace Patrick van Aanholt. (Mirror)
Liverpool ayaa xiiseyneysa daafaca Arsenal iyo Jarmalka Shkodran Mustafi, oo 28 jir ah, iyagoo raadinaya inay la soo wareegaan daafac dhexe kahor inta uusan xirmin suuqa kala iibsiga Isniinta. (Evening Standard)
Daafaca bidix ee Manchester United Brandon Williams, oo 20 jir ah, “looma ogolaan doono inuu amaah ku baxo”, ayuu yiri tababare Ole Gunnar Solskjaer.
Southampton iyo Newcastle ayaa lala xiriirinayay cayaaryahankan xulka Ingiriiska u safta.(Manutd.com)
Manchester City ayaa iska diiday fursad ay dib ula soo saxiixaneyso weeraryahanka Bosnia-Herzegovina Edin Dzeko oo 34 jir ah kaasoo u safta kooxda Roma. (Goal)